[27 / 01 / 2020] Ineszọ Bosphorus Istanbul Ga-emeghe Transportgbọ njem Ọha na Abalị 24	34 Istanbul
[27 / 01 / 2020] Ejiri 'Bursa Rail Systems Workshop' na BTSO	16 Bursa
[27 / 01 / 2020] 2020 Ahịa ụgbọ elu na-agba ọsọ ọsọ dị elu nke ihe nkiri YHT na-eme njem elekere kwa ọnwa	06 Ankara
[27 / 01 / 2020] Airportgbọ elu ụgbọelu Istanbul gafere ebumnuche njem ya na afọ arụmọrụ ya	34 Istanbul
:Bọchị: Nọvemba 2, 2019
Onye isi njikwa TCDD Ali İhsan Uygun gara leta onye otu AK Party Trabzon, Plan and Mmefu ego Member Av. Salih Cora nyere ozi dị mkpa banyere Railway Trabzon-Erzincan. AK [More ...]
Gọvanọ Akbıyık nyochara na Hakkari Ski Center; İdris Akbıyık, Gọvanọ nke Hakkâri, nyochachara mpaghara ihe nrịba elu nke 2.500 mita ọsọ na mita 4 nke emechara na 3500 altitude Ski Center. Gọvanọ Idris Akbiyik, [More ...]
Railway Samsun Ga-enye Nnukwu Ego; Onye otu AK Party Samsun osote Orhan Kırcalı kwuru na okporo ụzọ okporo ụzọ Samsun-Sivas-Kalın, nke a ga-ebufe na mgbakwunye ndị njem, ga-emegharị ọzọ n'ọnwa a. [More ...]
A ga-arụcha ụzọ ụgbọ oloko Istanbul na ọkara nke abụọ nke 2020. H. Kadri Samsunlu, Onye isi oche na onye isi oche nke ọdụ ụgbọ elu IGA, kwuru nkwupụta banyere okwu a. Kọmitii Executive nke arụmọrụ ọdụ ụgbọ elu IGA [More ...]
Mega Mega, St.Petersburg Hamburg Cost nke Oke Speed ​​Line 40 Ijeri dollar; Ekwuputara na arụ ọrụ nke okporo ụzọ dị elu n’etiti St. Petersburg na Hamburg, Germany nọ na nhazi. Secretary nke State nke Belarus Grigoriy Rapota, St.Petersburg-Minsk-Hamburg [More ...]
E mepere okporo ụzọ; Obodo Ankara emeela ka ọrụ ndị na-ebuwanye ụzọ na-ebuwanye ibu n'ọtụtụ ebe iji belata okporo ụzọ obodo wee dozie nsogbu njem. Otu nke Ngalaba Sayensi, [More ...]
Ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu Istanbul arụghị ọrụ n'ụtụtụ a mgbe ogbugbu ahịa nke mere ụnyaahụ. Ihe dị ka ndị ọrụ 300 gbakọtara na ebe a na-ahapụ ọrụ ọrụ, kwuru na ha agaghị ahapụ ubi ahụ ruo mgbe eburu usoro ndị dị mkpa. Dabere na Evrensel, Istanbul [More ...]
A ga-ahazi Nnukwu Ọzụzụ Obodo Obodo nke Kayseri Metropolitan. A ga-eme ihe omumu ụbọchị abụọ, 4-5 na Nọvemba. Obodo ukwu a na-ahazi ihe omumu iji mee ka ndi mmadu mara banyere Smart Urbanism. 4-5 Nọvemba [More ...]
Ka ọ na-ege egwu, nwanyị ahụ ụgbọ oloko ahụ kụrụ tufue ya; Nilgün Çolak (38), onye kwuru na ya na-eje ije site na-ege egwu na isi ekweisi na Ceyhan district nke Adana, ahụghị ụgbọ oloko nke ụgbọ oloko ahụ ma ụgbọ oloko ahụ kụrụ ya. [More ...]
Ndị na-enweghị Nlebara Visa Card Visa; MANULAS INC. maka ụmụ amaala na-enweghị ike ịme kaadị Manisa, visa na azụmahịa kaadị ọhụrụ na ọkwa a kpọsara n'izu, [More ...]
Taa na History 2 November 1918 Onye isi ndị amuma Light Mustafa Kemal Pasha, na mpaghara ya nyere iwu banyere ụzọ ụgbọ oloko; Acceptedzọ ụgbọ okporo ụzọ niile dị na ndịda ruo Konya ka a na-anabata n'ime mpaghara ọrụ Lightning Armies Group [More ...]
Ineszọ Bosphorus Istanbul Ga-emeghe Transportgbọ njem Ọha na Abalị 24
Ejiri 'Bursa Rail Systems Workshop' na BTSO
Esemokwu dị iche na Shah Logistics na Russian Transport
Airportgbọ elu ụgbọelu Istanbul gafere ebumnuche njem ya na afọ arụmọrụ ya
Emejuputa ya na Van Private Public Buses Transform Project
Ohere nweta mpaghara ala site na Samsun!